Ny tantaran'i Andrej & Anu! FANAMBADIANA VOALOHANY- SGS! ⋆ Singles Grace Singles
Namboarina98323	Jona 2, 2020
Anu Gopalan no anarako, fa mandeha amin'i Grace aho ao amin'ny tranonkala. Te hampahafantatra anao ny fomba nampiasan'Andriamanitra ny SGS tamin'ny fiainako aho. Nisoratra anarana tamin'ny SGS aho ary nilaza mazava tsara fa ny lehilahy karana ihany no tiako. Avy eo dia nanao dia nankany Switzerland aho, ary gaga tamin'ny haavon'ny fahasimbana nasehon'ny olona tao. Tsy tao anatin'ny haizina ara-panahy fotsiny i Eropa, fa nahagaga ny haavon'ny fahalotoam-pitondrantena. Nalahelo ny foko satria tsy hitan'ny olona eny amin'ny arabe sy ny zoro ireo sarin'i Zwingli sy Calvin. Toa tsy fahita firy ny filazantsara. Gaga aho fa be dia be ny olona ary tsy afa-manoatra fa manontany tena ve ny iray amin'izy ireo. Rehefa niverina tany Florida aho dia nanohy mavesatra ny foko tamin'izay hitako. Efa nivavaka tany amin'ny toerana any Afrika sy India aho saingy toa very kokoa i Eropa ary ny vavaka nataoko ho an'ny olona ao amin'ny kaontinanta dia tsy dia notononina matetika.
Rehefa niverina aho dia hitako fa nahavariana ahy ny mombamomba ny “Soandaitra” izay nipetraka tany Alemana. Nanoratra aho nanontany raha nitovy ny fahoriana ara-panahin'ny olona tany Alemana. Andrej tsy nandany fotoana hamaly. Nanoratra tamin'ny SGS vetivety izahay, nifanakalo fangatahana vavaka, avy eo nanomboka niresaka tamin'ny telefaona izahay ary tsy ela dia teto Florida i Andrej. Ny fianakaviam-piangonako dia raiki-pitia taminy avy hatrany. Tiako ho tadidinao fa tsy nisy nahalala ny endrik'ilay iray. Ny ray aman-dreniny dia tsy faly tamin'ny voalohany tamin'ny foto-kevitry ny fifandraisana. Talohan'ny nahatongavany akory mba hahita ahy dia niresaka tamin'izy ireo izy ary sosotra izy ireo. Nanaitra ny foko ny Tompo hanoratra taratasy amin'izy ireo ary nanalefaka ny sasany tamin'ireo fanaintainana ireo.
Niverina nitsidika ahy i Andrej 2 herinandro taty aoriana, ary vao haingana aho no nankany Alemana mba hihaona amin'ny fianakaviany. Tsy haiko izay lalana nalehany fa nifankatia daholo isika rehetra.
Te-hanamafy aho fa rehefa niresaka izahay sy Andrej voalohany, dia hitanay fa tsy misy fahasamihafana tanteraka amin'ny foto-pinoana, na dia amin'ireo faharesen-dahatra faran'izay kely aza izay ninoanay fa mety mila milavo lefona ho an'ny vadinay. Hitako tao amin'i Andrej ny famirapiratana sy ny fahalehibiazan'i Kristy izay tsy dia hitako loatra teo aloha. Feno fankasitrahana aho fa noravan'Andriamanitra ny sakana napetrako sy izay vato misakana rehetra napetrako tao an-tsaiko satria nahita lehilahy kristianina malala izay mitady hanome voninahitra ny Tompony aho ary feno fankasitrahana.
Efa niverina tany Alemana aho ary nitsidika teto i Andrej. Hanambady izahay amin'ny 17 Desambra ao amin'ny tanàna kelin'i Lemgo any Alemana.
Andrej sy Anu ———————————————-
Ny fijoroana ho vavolombelona nosoratako:
Tantaran'ny firenena roa… ..
Manana tantara hotantaraiko aho fa toa angano kristiana fotsiny, ny marina ihany ary sarotra ho an'ny tenako mihitsy aza ny hino.
Volana maro lasa izay, sahirana mafy aho tamin'ny faniriana hanambady, nitomany tao anaty ondana ho any amin'ny alina be nivavaka mba hanomezan'ny Tompo. Nanomboka nanontany tena aza aho raha ho tsara fanahy hanome ahy ny fanomezana ho mpitovo izy amin'izay hahafahako mianina raha ny faniriany ho mpitovo. Naniry aho ary nivavaka mba hianina amin'ny Tompo. Nanaiky ny tolona nataoko taminy aho saingy nino ny finoana fa hanome Izy.
Avy eo indray andro dia te-hitady tranonkala iray aho ho an'ireo olona nohavaozina izay hanome mpanelanelana hihaona amin'ny lehilahy karana nohavaozina. Nikaroka tao anaty tranonkala nandritra ny ora maro aho ary nahita an'i Soveriegngracesingles ary nanao sonia ny tenako ary nilaza mazava tao amin'ny piraofiliko fa lehilahy Indiana ihany no tiako.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanasa ahy handeha ho any Suisse ny namako akaiky indrindra (satria fantany fa te ho any foana aho ary handeha hiasa izy) ary niantsambotra aho tamin'io fotoana io. Nahafinaritra ny fotoana niainanay, izaho irery no nahita fahasimbana nanerana ny firenena ka nisahotaka ny foko. Efa nivavaka ho an'ny firenena eran'izao tontolo izao aho, saingy i Eropa dia maizina kokoa noho ny toerana hafa izay notsidihiko. Vao mainka nahasosotra ahy izany satria natomboka tao ny fanavaozana ary raha nijery ny toe-java-misy eto Suisse aho, dia tsy afa-nanoatra. Niverina tamin'ny fo mavesatra aho, nalahelo fa tsy niraharaha nivavaka ho an'i Eropa toa ahy.
Nijery an'i SGS (jurisdgracesingles) aho ho an'ny eropeana iray ary nahita ilay anarana hoe Sovereigngrace, lehilahy 35 taona avy any Alemana izay nanoratra kely momba ny tenany ihany, afa-tsy ny fomba namonjeny sy ny fomba ahitany ny fotopampianaran'ny fahasoavana. Nahagaga ahy izany ary nino aho fa hanana valiny marina momba ny fahamatoran'ny olona amin'ny toe-piainany ara-panahy. Nanoratra ho azy aho ary tonga ny valiny haingana. Nanomboka nanoratra momba ny fotopampianarana sy ny finoanay amin'ny SGS izahay avy eo ary fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka nifanoratra imailaka izahay. Indray andro, nanoratra izy ary nilaza fa handeha ho any Johannesburg, Afrika Atsimo ary tsy afaka miditra amin'ny internet ka nanontany raha afaka mahazo ny nomeraon-telefaonako izy, satria nifanakalo koa ny filan'ny vavaka ary nivavaka ho an'ny raharaha maika sy maika izy. hahalala ny vokany. Nomeko azy ny nomeraoko. Tsy nahazo antso avy any Afrika aho fa niantso izy rehefa niverina tany Alemana.
Ny resaka nifanaovanay voalohany dia 2-3 ora ary lava kokoa. Tsy mora velively ny miresaka amin'olona. Tsy nisy sary navoaka an-tserasera ka tsy nahafantatra izay toa anay. Niresaka momba ny fotopampianarana izahay ary tsy nilazako taminy ny faharesen-dahatra nomeko, nahatsikaritra aho fa i Andrej dia naharesy lahatra izany ihany. Rehefa niresaka taminy momba ny kolontsaina aho dia toa nahatakatra izy, fa nanao dia lavitra loatra tamin'ny tenany. Gaga aho fa niambina ny fihetsem-poko. Mbola nijanona ny zava-misy, tsy karana izy !!
Vetivety dia te hihaona i Andrej. Nanidina izy hihaona amiko any Etazonia ary faly aho, fa ny fihaonana voalohany dia tena be vato. Nanjary tena izy fa Alemanina izy, ary vao mainka natahotra ahy ny fijerena ny sarin'ny fianakaviany, satria tsapako fa tsy ho tafiditra mihitsy aho. Hafa be amin'izy ireo aho. Nitomany aho tamin'ny andro voalohany nifanenenanay ary manontany tena raha hahomby ve izany. Nandeha tany am-piangonana izahay ny alahady maraina fa nipetraka nitokana ary tsy fantatry ny olona fa niaraka izahay, ary tokony holazaiko fa tafiditra tsara izy. Toy ny hoe natao ho ao amin'io fiangonana io izy. Mbola tsy nahita lehilahy nitory ny tenin'Andriamanitra toa an'i Andrej aho taloha. Ny tolakandro dia nandeha nitsangatsangana teny amoron-dranomasina izahay niresaka zavatra tsy misy dikany toy ny asa, ny dia ary ny olona samihafa eran'izao tontolo izao. Tsy nino aho fa mora ny niresaka taminy. Rehefa avy niangona izahay dia nankany amin'ny trano roa samy hafa. Tsaroako ny teniko tamin'i Andrej tamin'io maraina io .. .. “Te hampahafantatra ahy ny sitrapony fotsiny Andriamanitra, izay ihany no tadiaviko… tsy misy intsony…”. Ny olona rehetra dia samy tia an'i Andrej. Mino aho fa teo no nanomboka nitia an'i Andrej voalohany. Nanontaniana izy momba ny zavatra tsapany momba an'i Martin Luther (ilay mpitondra fanavaozana). Novalian'i Andrej ny masony nitodika tany an-danitra, ary feno fisaorana noho ny faharesen-dahatra nataony tamin'ny kalvinista, "Ah..ya..Luther.. tiako Lotera." Mbola tsy nahita lehilahy tena faly tamin'ny fotopampianarana toa azy aho ary namaky tsara. Ny baiboliny no vatolampy sy vatofantsiny. Tiany izany ary nitazona ny tenin 'Andriamanitra ho fahefana lehibe indrindra izy. Tiany ny mandre fitoriana tsara, ary mamaky ny literatiora nohavaozina rehetra azony. Na izany aza, ny fitiavany ny fanahy dia nahagaga kokoa, miaraka amin'ny fandanjana eo amin'ny fotopampianarana, teolojia ary ny Kristianisma azo ampiharina. Efa ela aho no naniry ny hanambady lehilahy izay tsy hanana afa-tsy ny mason'i Kristy, ary eto aho dia nahita lehilahy toa izany. Na izany aza, tsy ho resy lahatra aho raha tsy efa nahazo toromarika avy amin'ireo mpanolo-tsaina avy amin'andriamanitra marobe, toy izay mandray fanapahan-kevitra. Niala i Andrej tamin'io faran'ny herinandro io ary ireo olona vitsivitsy tao am-piangonana izay nahalala, anisan'izany ireo tsy mino, dia nanaiky azy tamim-pahatsorana.
Niverina i Andrej tapa-bolana taty aoriana, rehefa nanomboka nipoitra tao am-poko ny sitrapon'Andriamanitra, saika nampatahotra ahy tamin'ny fahazavany. Roa herinandro taty aoriana, izaho sy ilay nendasako dia nankany Alemana hijanona ary hihaona amin'ny fianakaviany rehetra mandritra ny herinandro. Mahafinaritra fotsiny ry zareo. Tiako daholo !! Ny ray aman-dreniny sy ny iray tam-po aminy dia tia ahy sy izaho. Nihevitra ny namako fa mahafinaritra ihany koa izy ireo. Rehefa tapitra ny fijanonanao ao an-tranon'olona, ​​dia fantatrao izy ireo sy ny sasany amin'ireo quirks ananany. Fantatro fa namaly ny Tompo. Tsy maninona aho izao raha manomboka mieritreritra fa mety izany no sitrapony. Nanomboka nivavaka aho mba hahazo fanazavana.
Naniry ny hanambady karana aho satria te hanomboka fihavanana amin'ny fianakavianay hindoa efa nanalavitra, satria namoy ny ray aman-dreniko tamin'ny fahatanorany. Te hitady fomba kely hampifaliana azy ireo aho. Nanoratra tamin'ny dadatoan'ny reninay izay mipetraka any NJ miaraka amin'ny fianakaviany izahay. Nifandray kely taminy aho. Nanoratra izy ary ny dadatoako taoriana kelin'izay dia nanao dia lavitra nankany Alemana izay nihaonany ary niara-nisakafo tamin'i Andrej, ary samy nahafinaritra izy roa. Nanomboka niteny izahay sy ny dadatoako. Nanomboka ny fampihavanana na dia hanambady lehilahy alemanina iray aza aho. Tsy fombantsika ny lalan'Andriamanitra!
Raha nisy olona tsy mino, dia izaho izany. Ny fisalasalana no anarako, ary minoa ahy, ny olona akaiky ahy no hijoro ho vavolombelona. Andrej dia tsy mijery, tsy misy feo ary toa tsy nisy olon-tiako hanambadiana..N tadidiko mihitsy aza ny fanehoan-kevitra tamin'ny namako akaiky indrindra momba ny fanantenako fa ny fiteny iray tsy tokony hianarako mihitsy dia ho Alemanina, nefa, tonga lafatra i Andrej… tonga lafatra ho ahy amin'ny lafiny rehetra. Tahaka ny hoe izy no olona nafenina teto amin'ity vazan-tany kely ity, tonga lafatra ho ahy, nefa Andriamanitra kosa namonjy azy, nanadio azy mba ho mety amiko ary manao toa ahy koa izy. Nahita firavaka tsy fahita firy nafenina aho, ary indraindray, feno fankasitrahana aho fa izaho no nanana voninahitra nahita azy io sy nitahiry azy. Betsaka no mijery ny lehilahy sasany ary miteny hoe .. ”diamondra izy ao anaty harona ..” saingy mijery an'i Andrej feno fankasitrahana aho fa nahita ilay diamondra ihany.
Rehefa mahita an'i Andrej aho dia mahita ny mariky ny tena Kristiana, izay tia ny Tompo, izay nahita ny fahamarinan'ny teniny ka tsy hisy marimaritra iraisana sy izay tia an'i Kristy. Hitako fa Andriamanitra dia tsara fanahy tokoa tamiko, satria tao anatin'ny 24 ora, tsy mbola nanana segondra iray segondra aho raha tsy izany no lehilahy ho ahy. Novaliana ny vavaka nataoko !! Feno fankasitrahana aho fa tsy nila nilefitra tamin'ny faharesen-dahatra tokana, nefa nahita lehilahy iray izay ho tena mpitarika ny tokantranontsika, vady toa an'i Kristy ary ray izay hivavaka sy hikatsaka ny hampianatra ny zanany ny fahamarinan'i Tenin 'Andriamanitra. Fantatro fa hahita an'i Kristy ao amin'ny rainy ny Zanako toa ahy ary izaho dia voatahy bebe kokoa noho izay azoko nangatahina na noheveriko fa mety.
Vaovao farany: Herintaona mahery izao izahay sy Andrej no nanambady. Mipetraka any Etazonia izahay ary manatrika fiangonana batista nohavaozina. Ny fijoroana ho vavolombelona voasoratra iray taona mahery lasa izay, dia mbola mitohy mandraka ankehitriny.
Tsara tokoa Andriamanitra !!
Sokajy: Mpikambana- Mpikarama mandoa, Mpikambana- Tsy mandoa vola
Ny tantarantsika- Eric sy Natty Lasch
Ny tantaran'i Tim sy Carrie - Singles Grace Mpanapaka on Ny tantaran'i Tim sy Carrie!
LindaK on Ny efatra tamin'ireo zanako enina dia nahita vady kristiana tamin'ny alalàn'ny Singles Grace Singles !!
IrisFlower on Ny tantaran'i Tim sy Carrie!
IrisFlower on Ny tantaran'i Daniel & Elisa
IrisFlower on Tantaran'i Bobby sy Mary!
Mpikambana- Mpikarama mandoa
Mpikambana- Tsy mandoa vola
Mihira Kristiana Kalvinista